Hubi feature-caado qowladda pachinko [sixitaanka ciddiyaha iyo ciddiyaha Rev. ed.]
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Hubi feature-caado qowladda pachinko [sixitaanka ciddiyaha iyo ciddiyaha Rev. ed.]
Marka sida caadiga ah u baxay inuu ka ciyaaro qowladda pachinko a, waxaan u malaynayaa in aynu arki doonaa Ujeedada kowaad wuxuu ahaa mid ka mid ah model by mid ka mid ah. Sidaas daraaddeed, waa sixitaanka cidiyaha in aan doonayo in aan ogaado ah. sixitaanka ciddiyaha, haddii uu jiro diyaar u saaray dukaamada, waxa kale oo uu noqonayaa wax go'aan ah ama aan. ka kiiska, sida CR, Marka laga reebo, maxaa yeelay, sida Hanemono mararka sixitaanka dhidib waxaa guud ahaan loo kala qaybiyaa natiijada, dadka aan awoodi doonaan in ay noqotay in ay ka fogaadaan jeegga sixitaanka cidiyaha in si gaar ah waa ciyaar xarunta Hanemono.
sixitaanka ciddiyaha, maamulaha ama sare, sidoo kale si ay u fuliyaan qof gaar ah, sida artist dhidib ah waa caadi. The aadanaha, in kastoo inta badan nolosha waxaa jira caado. Xaqiiqada ah in qof gaar ah waxaa sidoo kale lagu qabtaa qowladda pachinko waa xaqiiqda ah in caado ka sixitaanka by dukaanka kasta waa aamin. Haddii Minukere caado ka sixitaanka ciddiyaha, boqolkiiba guuleystay iman doonaa ka badan ka Faydno waxa nimo.
Sidaa darteed, waxaan ku bilaabi doonaa a arki jidka sixitaanka cidiyaha.
si aad u aragto iyada oo sixitaanka dhidibkii, iyada oo qowladda pachinko ku saabsan laba toddobaad ka mid ah todobaadkii ugu yar, waxaad u baahan doontaa si ay u dhawraan. Isagoo ka hadlayay sababta, maxaa yeelay, sixitaanka ciddiyaha la sameeyo si ay u kala duwan yihiin of a milimitir yar, oo aan Ika si adag arkay in dhibic pin ah, aad ka maqnaan. Bilowga ah, oo aan ku filan si ay u ogaadaan bilowday in si cad waa inay eegtaa waxay u furan, waxa ay sheegay in ay adag tahay si loo ogaado whether're arrin u furan. Haddii furan oo ku wareegsan ciddiyaha jasiiradda
, waa shuruud la'aan ay si by dukaan kasta, waxa aanu halkan kuma odhan, Si kastaba ha ahaatee, marka eegaya dhidibkii top ka, isku day inaad raadineyso noocan oo kale ah ciddiyaha Fadlan. In
, waa sixitaanka ciddiyaha of si sahlan loo fahmi bilowga ugu fiican.
sixitaanka ciddiyaha of adkaynaya dareen in tii pachinko, mid ka mid ah dhidibkii, wax yar ka badan dhinaca chucker bilowga ah, waa arrin ah kaas oo dhidibkii iman ka baxsan. In the case of sixitaanka ciddiyaha this, waa meel la yiraahdo lix jeer ka xawaare ku wareeg ah 1 daqiiqo ah oo ku saabsan 5 jeer. Qabsiga, fadlan qabaa saxayo ciddiyaha caadi ah oo ka mid ah tii pachinko ratio diinta ka sare.
Haddii aad sii adkaynaya, bilaabi Chat Dhinacyada labada dhinac ee gaariga, waxaad arki doontaa daboolaa labada dhidib. In the case of sixitaanka ciddiyaha this, waa meel la yiraahdo shan jeer ka xawaare ku wareeg ah 1 daqiiqo ah oo ku saabsan 4.6 jeer. Oo maalintaas ururinta, marka aad rabto in aad gabi ahaanba waa faa'iido guud, taxaddar sababtoo ah waa sixitaanka dhidib u muuqata in meelaha qaar ka mid ah. Haddii sida ku dhuftay lahaa ciddiyaha adkaynaya, waxaa si dhaqso ah u noqon doono dhammeeyey Nante kun oo yen. In
, eegto dhidibkii top ka gees ah, dhidibkii ka mid ah mid ka mid ah musmaarrada, u furan yihiin ka baxsan badan chucker bilowgii iyo xataa in yar waa dhidib wanaagsan. Haddii aad eegto xagga sare, kala duwanaan cad oo aad ku arki kartaa. In inta badan waxaa loo arkaa sixitaanka ciddiyaha dhacdooyinka sida. Xaaladdan oo kale, xawaaraha wareeg ah 1 daqiiqo noqon doonaa oo ku saabsan 6 jeer 7 jeer. On labada dhinac ee ku ciddiyaha
, ama u furan waxaa lagu arki karaa, dadka caado ka sixitaanka dhidib waxaa jiri doona. In booqashada dukaan pachinko ee qof walba ah, oo labadoodaba in furitaanka dhidibkii, fadlan isku day in aad hubiso.
Intaa waxaa dheer, wax yar ka hor ka yar soo afjarmay, waxaa jira meelo halkaas oo uu jiro farqi u dhaxeeya ciddiyaha iyo cidiyaha.
labada dhinac ee dhidib ah ee farqiga, kawin ka biyodiiday waa, ka hor inta uusan bilaaban socday, waxaan u noqday beddelo, sida kubada dhaco halkaas. sixitaanka ciddiyaha, maxaa yeelay, waa dhiso guddiga oo dhan, ma ahan oo keliya bilowdo, dhinaca ciddiyaha Waxa kale oo aanu kugu dhiirinaynaa in aad isku dayaan in ay xaqiijin.
Xitaa haddii aadan eegno ciddiyaha ilaa hadda, kawin aasaasiga ah in viewed top ka, waxaan u malaynayaa in haddii fiiro waxaa la bixiyaa iyadoo butukha kale ku raaxaysan karaan. Waa meel in 5 jeer ka 6 jeer. Oo maalintaas ururinta, marka aad rabto in aad gabi ahaanba waa faa'iido guud, taxaddar sababtoo ah waa sixitaanka dhidib u muuqata in meelaha qaar ka mid ah. Haddii sida ku dhuftay lahaa ciddiyaha adkaynaya, waxaa si dhaqso ah u noqon doono dhammeeyey Nante kun oo yen. In
Xitaa haddii aadan eegno ciddiyaha ilaa hadda, kawin aasaasiga ah in viewed top ka, waxaan u malaynayaa in haddii fiiro waxaa la bixiyaa iyadoo butukha kale ku raaxaysan karaan. Waxaa lagu talinayaa in aad isku daydo in.
Xitaa haddii aadan eegno ciddiyaha ilaa hadda, kawin aasaasiga ah in viewed top ka, waxaan u malaynayaa in haddii fiiro waxaa la bixiyaa iyadoo butukha kale ku raaxaysan karaan.